Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Ruth 1
Nepali New Revised Version, Ruth 1
1 उहिले नै न्‍यायकर्ताहरूको शासनकालमा देशमा अनिकाल पर्‍यो, अनि यहूदाको बेथलेहेमबाट कुनै एक जना मानिस आफ्‍नी पत्‍नी र दुई भाइ छोराहरूलाई लिएर मोआबीहरूको देशमा केही समयको लागि बस्‍नलाई गए।
2 ती मानिसको नाउँ एलीमेलेक थियो। तिनकी पत्‍नीको नाउँ नाओमी र तिनका दुई छोराहरूका नाउँ महलोन र किल्‍योन थियो। तिनीहरू यहूदाको बेथलेहेमका एप्रातीहरू थिए। तिनीहरू मोआबीहरूको देशमा गए, र त्‍यहीँ बस्‍न लागे।
3 नाओमीका लोग्‍ने एलीमेलेक मरे, र तिनी आफ्‍ना दुई छोराहरूसँग छोड़िइन्‌।
4 यी छोराहरूले मोआबी स्‍त्रीहरू विवाह गरे। एउटीको नाउँ ओर्पा र अर्कीको नाउँ रूथ थियो। तिनीहरू त्‍यहाँ प्राय: दश वर्ष बसेपछि
5 दुवै महलोन र किल्‍योन पनि मरे। यसरी ती स्‍त्री आफ्‍ना दुई छोराहरू र आफ्‍ना पतिबाट पनि बिछोड़ भइन्‌।
6 परमप्रभुले आफ्‍ना मानिसहरूको हेरचाह गरेर तिनीहरूलाई भोजन दिनुभएको छ भन्‍ने कुरा जब तिनले मोआब देशमा सुनिन्‌, तब नाओमी र तिनका बुहारीहरू त्‍यहाँबाट घर फर्कन तयार गर्न लागे।
7 तब आफ्‍ना दुई बुहारीहरूलाई साथमा लिएर आफू बसेको ठाउँ तिनले छोड़िन्‌, र आफ्‍नो घर यहूदाको बाटो लागिन्‌।
8 तब नाओमीले आफ्‍ना दुई बुहारीहरूलाई भनिन्‌, “तिमीहरू दुवै आफ्‍नो-आफ्‍नो माइती घर फर्क। जसरी तिमीहरूले ती मरिसकेकाहरू र मप्रति दयापूर्ण व्‍यवहार गरेका थियौ, त्‍यसरी नै परमप्रभुले पनि तिमीहरूप्रति दयापूर्ण व्‍यवहार गरून्‌,
9 अनि उहाँले तिमीहरू दुवैलाई तिमीहरूका आफ्‍ना-आफ्‍ना भविष्‍यका पतिका घरमा सुरक्षित राखून्‌।” तब तिनले उनीहरूलाई चुम्‍बन गरिन्‌, र तिनीहरू डाँको छोड़ी-छोड़ीकन रोए।
10 त्‍यसपछि उनीहरूले तिनलाई भने, “हामी तपाईंका मानिसहरूकहाँ तपाईंसँग जानेछौं।”
11 तर नाओमीले भनिन्‌, “हे मेरा छोरी हो, फर्क, तिमीहरू किन मसँग आउने? के तिमीहरूका पति हुनलाई म अझै छोराहरू जन्‍माउन सक्‍छु र?
12 फर्क, मेरा छोरी हो, जाऊ। किनकि फेरि विवाह गर्नलाई म बूढ़ी भइसकेकी छु। नानी पाउन अझै आशा भए, र मैले आज राती नै विवाह गरेर छोराहरू पाएँ भने पनि
13 तिनीहरू बढुञ्‍जेल तिमीहरू पर्खन्‍छौ र? के तिमीहरू विवाह नगरी बस्‍छौ? होइन, होइन मेरा छोरी हो, परमप्रभु मेरो विरुद्धमा हुनुभएकोले मेरो अवस्‍था तिमीहरूको भन्‍दा खोटो छ।”
14 तब तिनीहरू फेरि डाँको छोड़ी-छोड़ीकन रोए। त्‍यसपछि ओर्पाले आफ्‍नी सासूलाई चुम्‍बन गरेर आफ्‍ना मानिसकहाँ फर्केर गइन्‌, तर रूथचाहिँ तिनीसितै टाँसिरहिन्‌।
15 तब नाओमीले भनिन्‌, “हेर त, तिम्री बहिनी त आफ्‍ना मानिसहरू र आफ्‍ना देवताहरूकहाँ फर्केर गई। तिमी ऊसितै फर्केर जाऊ।”
16 रूथले जवाफ दिइन्‌, “मलाई फर्केर जान र तपाईंलाई छोड्‌न कर नगर्नुहोस्‌। तपाईं जहाँ जानुहुन्‍छ म पनि त्‍यहीँ जानेछु। तपाईं जहाँ बस्‍नुहुन्‍छ म पनि त्‍यहीँ नै बस्‍नेछु। तपाईंका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन्‌, अनि तपाईंका परमेश्‍वर मेरा परमेश्‍वर हुनेछन्‌।
17 तपाईं जहाँ मर्नुहुन्‍छ म पनि त्‍यहीँ मर्नेछु, र त्‍यहीँ नै गाड़िनेछु। मृत्‍युबाहेक अरू कुनै कुराले तपाईं र मलाई अलग गरेमा परमप्रभुले मसँग अति पनि कड़ा व्‍यवहार गरून्‌।”
18 रूथले आफूसँग जाने दृढ़ सङ्कल्‍प गरेकी देखेर नाओमीले अरू केही भनिनन्‌।
19 अनि ती दुवै जना हिँड़े, र बेथलेहेममा आइपुगे। जब तिनीहरू बेथलेहेममा आइपुगे तब जम्‍मै सहरमा हलचल मच्‍चियो। आइमाईहरूले भन्‍न लागे, “के यिनी नाओमी नै हुन्‌?”
20 तिनले भनिन्‌, “मलाई नाओमी नभन। मलाई मारा* भन, किनभने सर्वशक्तिमान्‌ले मेरो जीवन तीतो बनाइदिनुभएको छ।
21 म भरिपूर्ण भएर गएको थिएँ, तर परमप्रभुले मलाई रित्तो फर्काएर ल्‍याउनुभएको छ। मलाई किन नाओमी भन्‍छौ? परमप्रभु मेरो विरुद्धमा उठ्‌नुभएको छ। सर्वशक्तिमान्‌ले ममाथि विपत्ति ल्‍याउनुभएको छ।”
22 यसरी नाओमीकी बुहारी मोआबी रूथ तिनीसँग मोआब देशबाट आइन्‌। तिनीहरू बेथलेहेममा आइपुग्‍दा जौको कटनी हुँदैथियो।
Judges 21 Choose Book & Chapter Ruth 2